Okwu Mmalite nke R & D Center
Ebe r & d nke shandong landian biotechnology co., Ltd. e dechara ma tinye n'ọrụ na 2014. The r & d center ekpuchi a n'ala ebe 2010m2, na ngụkọta akụrụngwa ego na ugbu a ogbo ruru 5.5 nde yuan.The nnyocha na mmepe center a mma site mkpa ọchịchị ngalaba, ma guzosie ike "weifang engineering laabu", "weifang engineering and technology research center", "academician sayensị ọdụ ọdụ", ma kpọọ academician Yang shengli na nnyocha na mmepe otu maka ogologo oge oru nduzi nke nnyocha na mmepe center. Lọ ọrụ nyocha na mmepe ahụ eguzobela otu ndị nyocha na ndị mmepe nwere ụmụ akwụkwọ nna ukwu 5 na majors metụtara yana ụmụ akwụkwọ iri na anọ na ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji. Ruo ugbu a, ọ nwetala patent 3 mepụtara, ikike nchọpụta ngwa ngwa 10 yana nrụpụta sayensị na teknụzụ ndị ọzọ
A na-ejikwa ụlọ ọrụ r & d nwere ọnụ ụlọ abụọ 100 dị larịị, 14 set nke 5L gbaa ụka ngwa ọrụ, ụzọ abụọ nke 50L gbaa ụka pilot akụrụngwa, na-aga n'ihu ion usoro mgbanwe, elu arụmọrụ mmiri mmiri chromatograph, gas chromatograph, abụọ tent nke yiri echetakwa gbaa ụka tankị. , ultra-low temperature friji, obere ule seramiiki akpụkpọ, ultrafiltration akpụkpọ ahụ, nanofiltration akpụkpọ ahụ na ndị ọzọ microbial ibuo ngwa; N'otu oge ahụ, ọhụrụ polymer ihe polymerization ule akụrụngwa na 20L anaghị agba nchara polymerization ule akụrụngwa; Dị ka mmepe mkpa nke ụlọ ọrụ eji ngwa oru nyocha di iche-iche di elu, ihe ndi ozo di ugbu a kariri nde 10.